Thursday September 16, 2021 - 12:20:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa markale shacabkeeda ugu baaqday in ay taageera siiyaan ciidamadeeda dagaalka culus kula jira maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega ee TPLF loo yaqaan.
wasaaradda difaaca xukuumadda Addis Ababa waxay sheegtay in taageerada shacabka Itoobiyaanka ah ay muhiim u tahay guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah waxa ay ugu yeertay Argagaxisada.
Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa uga digtay dhalinyarada kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega in ay ku biiraan sufuufta kooxda TPLF ee dagaallada culus uga jirta gobolka Amhara.
Hoggaanka ciidanka Difaaca Itoobiya ee loo yaqaan ENFD ayaa ku eedeeyay jabhadda Tigreega in ay soo dagaal gelisay carruur aan qaangaarin islamarkaana ay abuurayso naceyb udhaxeeya qowmiyada itoobiya wada dega.
Goorsii horraysay hoggaanka ismaamulka Amxaarada ayaa ku dhaqaaqay qafaal guud oo lagu ciidameynayo dhalinyarada Amxaarada si loo difaaco gobolka Gonder oo horumar dhanka dagaalka ah ay ka sameynayaan maleeshiyaadka TPLF.
Dagaalka sokeeye ee ka holcaya waqooyiga Itoobiya ayaa qarka usaaran in uu dhowaan hal sana jirsado islamarkaana waxaana muuqata in dagaalkaas uu kusii fidayo gobollo dadka degan ay ku badanyihiin ciidamada melleteriga xabashida.